SIDA LOOGA SAARO ERAYGA SIRTA AH EE EXCEL FILE - JILICSAN
Sida looga saaro erayga sirta ah ee Excel File
Badbaadinta faylashaada waa tallaabo fiican laakiin haddii aad illowdo erayga sirta ah, waxaad waayi doontaa xogtaada. Dhammaanteen waan ognahay sida badanaa loo isticmaalo faylasha Excel si loo kaydiyo xogta muhiimka ah. Dadka intiisa badan waxay rabaan inay xafidaan xogtooda sirta ah iyagoo sir siinaya dhammaan buuga shaqada ama xaashi gaar ah oo faylka excel ah. Nasiib darro, haddii aad illowdo erayga sirta ah, uma baahnid inaad argaggixiso. Waad soo ceshan kartaa faylkaaga Maxaa dhacaya haddii aad rabto inaad ka saarto furaha sirta ah faylka Excel? Ma samayn kartaa? Haa, waxaa jira habab aad si fudud uga saari karto erayga sirta ah. Ma awoodi doontid inaad soo ceshato erayga sirta ah laakiin waxaad ka saari kartaa erayga sirta ah.
Habka 1: Ka saar erayga sirta ah ee xaashida shaqada ee Excel
Habka 2: Ka saar gacanta ilaalinta erayga sirta ah ee Excel
Habka 3: Ka saar erayga sirta ah ee Excel Password
Habka 4: Ka saar furaha sirta ah markaad kaydinayso faylka Excel
Kahor intaanan bilaabin nidaamka, waxay ahaan lahayd badbaado inaad kaydiso xaashidaada. Si kastaba ha ahaatee, xogtu shaqo kuma lahan habka laakiin wali qaadashada tillaabo taxadar leh ayaa noqon doonta fikrad wanaagsan.
Ku bilow Magacaabida kordhinta ee faylkaaga .xlsx ilaa zip
Markaad bedesho kordhinta hubi inaad shiday ikhtiyaarka kordhinta faylka ee hoos yimaada qaybta aragtida haddii aadan awoodin inaad aragto fidinta faylka faylalkaaga.
Tallaabada 1: Midig ku dhufo faylka oo dooro Magacaabid doorasho. Guji haa marka la soo jeediyo.
Tallaabada 2: Hadda waxaad u baahan tahay soo saar sibka faylasha xogta adigoo isticmaalaya mid kasta software kombaresarada faylka . Waxaa jira software kala duwan sida 7 zip, WinRAR, iwm oo laga heli karo internetka.
Tallaabada 3: Ka dib soo saarista faylasha, waxaad u baahan tahay meel hel ah xl gal.
Tallaabada 4: Hadda ogow Xaashiyaha shaqada gal oo ku dhufo si aad u furto.
Tallaabada 5: Hoosta Gal xaashida shaqada , waad ogaan doontaa kaaga xaashida faafinta . Ku fur xaashida Xusuus-qorka.
Tallaabada 6: Haddii aad haysato hal xaashi shaqo oo ka hoosaysa xaashida faafintaada, way kuu fududaan doontaa inaad horay u sii waddo. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay dhacdo in aad kaydiso faylal badan, waxaad u baahan tahay inaad furto fayl kasta oo ku jira Notepad oo aad hubiso:
Fiiro gaar ah: Qiimaha HashValue iyo milixdu way ka duwanaan doonaan faylkaaga.
Tallaabada 7: Hadda waxaad u baahan tahay tirtir dhammaan khadka laga bilaabo< xaashida ilaalinta….to =1/ >.
Tallaabada 8: Ugu dambeyntii kaydi faylkaaga .xml. Waxaad u baahan tahay inaad raacdo tallaabada 4 fayl kasta .xml oo aad kaydiso dhamaantood. Ku soo celi faylashan galkaaga sibka Si aad ugu darto galalka xml la beddelay, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad haysato barnaamijka software-ka-buuxinta faylka oo ka furan nidaamka. Hadda waxaad u baahan tahay inaad dib u baadho meesha aad ku kaydisay faylalkaaga la beddelay oo aad ku kaydiso galka zip-ka adigoo isticmaalaya software-ka-buufinta faylka.
Tallaabada 9: Magacaabista kordhinta faylkaaga dib ugu noqo .xlsx ka siib . Ugu dambeyntii, dhammaan faylashaada waa kuwo aan la ilaalin oo si fudud ayaad u furi kartaa.
Sidoo kale Akhri: Waa maxay faylka XLSX & Sida loo furo faylka XLSX?
Haddii aad rabto inaad gacanta ku saarto ilaalinta erayga sirta ah ee Excel, tillaabooyinkan hoos ku xusan ayaa ku caawin doona.
Tallaabada 1: Fur heer sare laga bilaabo Dhammaan barnaamijyada menu ama ku qor Excel sanduuqa raadinta.
Tallaabada 2: Guji Faylka oo u gudub dhanka Furan qaybta. Guji furaha sirta ah ee ilaaliya faylka Excel .
Tallaabada 3: Ku qor erayga sirta ah iyo furan faylka.
Tallaabada 4: Guji Faylka markaas Xog dabadeed Guji Ku sir erayga sirta ah
Tallaabada 5: Ka saar erayga sirta ah sanduuqa oo ka tag sanduuqa faaruq . Ugu dambeyntii, dhagsii badbaadi.
Waxaa jira qaar ka mid ah barnaamijyada ka saarista sirta ah ee Excel sidoo kale laga heli karo online. Haddii aad rabto inaad ka gudubto habka kor ku xusan ee ilaalinta faylalkaaga Excel, waxaad dooran kartaa habka aad uga saarto furaha sirta ah ee Excel.
Mareegtan waxay ku siinaysaa pro iyo nooca bilaashka ah ee ikhtiyaarka ka saarida erayga sirta ah ee Excel. Waxaad ka heli doontaa macluumaad dhamaystiran oo ku saabsan sida ay u shaqeyso mareegahan. Waa shabakad fudud oo isticmaale-saaxiibtinimo ah oo kaa caawinaysa inaad ka saarto furaha sirta ah ee la illoobay ee faylkaaga Excel.
Habkan, waxaad ku baran doontaa sida meesha looga saaro erayga sirta ah ee excel adiga oo kaydinaya feylkaaga excel-ka adigoo isticmaalaya muuqaal ahaan. Habkani waxa uu shaqayn doonaa oo kaliya haddii aad hore u taqaanay erayga sirta ah ee faylkaaga Excel oo aad rabto in aad ka saarto si aad u sii isticmaasho. Si aad meesha uga saarto, raac tillaabooyinka hoose:
Tallaabada 1: Fur faylka Excel ee furaha lagu ilaaliyo iyo Geli erayga sirta ah marka degdeg.
Tallaabada 2: Guji Faylka tab ee shayga bidix ee sare ka dibna dhagsii U keydi sidii doorasho ka mid ah liiska.
Tallaabada 3: A U keydi sidii daaqad ayaa furmi doonta. Guji Qalab hoos-hoos u dooro Doorashooyinka guud liiska.
Tallaabada 4: Xulashada Guud, ka tag erayga sirta ah si uu u furmo iyo erayga sirta ah si aad wax uga bedesho beerta madhan dabadeed dhagsii OK furahaagana waa laga saarayaa.
Hadda waxaad awoodi doontaa inaad furto feylka Excel adigoon gelin furaha sirta ah.
Waxaan rajeyneynaa, hababka kor ku xusan inay ku caawin doonaan ka saar ilaalinta sirta ah faylkaaga Excel iyo sidoo kale warqad shaqo. Si kastaba ha noqotee, xasuusnoow in xogta muhiimka ah ay u baahan tahay in la sugo, markaa xafid feylashaada Excel sirta sirta ah.